Hogamiye ku xigeenka Galmudug oo sheegay in ay bilaabayaan…
By axadle On Jul 30, 2020
Hogamiye ku xigeenka Dowlad-goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in si deg-deg ah u dhisayaan kaabayaasha dhaqaalaha Maamulkaasi sida warbaahinta ugu sheegay magaaladda Dhuusamareeb caasimada maamulkaasi.
Cali Daahir Ciid Hogamiye ku xigeenka oo amaanay doorka bulshada Dhuusamareeb ee marti galinta shirka Hogamiyayaasha Xukumadda Faderaalka iyo Dowlad-goboleedyada ee ka dhacay caasimada ayaa sheegay in ay qorshaynayaan dib u dhiska laamiga mara bartamaha caasimada ka hor furitaanka shirka Dhuusamareeb 3 oo loo balansanyahay bartamaha Augosto.
Hogamiye Ciid ayaa sheegay in qarashaadka ku baxaya dhisamaha wadadaasi ay qayb ahaan bixinayso wasaarada Maaliyada Xukumada Faderaalka Soomaaliya, sidoo ganacsata ka dalbaday in ay qaataan doorkooda dib u dhiska wadamada halbowlaha u ah isku socodka Caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb.
“Reer Dhuusamareeb arinta ugu way ee noo taal waa in aan wadadaan weyn ee magaaladda dhexmarta aan iska dhisno, inta uusan dhicin shirka loo balansanyahay,wadadaan qarashka ku baxaya qayb ahaan Xukumadda ayaa qaadanaysa gaar ahaan wasaarada Maaliyada qaybta kalana waxaa la rabaa in ganacsatada, dadka deegaanka iyo maamulka caasimada ay u diyaar garoobaan” ayuu yiri Cali Daahir Ciid.
”asbuucaan in aan iska bilaawno oo aan iska dhisno wadadaan si bilicda magaaladda ay ugu qayb qaadato” ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid.
Cali Daahir Ciid oo u mahad celiyay maamulka Caasimada Galmudug iyo saraakiisha aminga ee qeybta ka qaatay shirkii wadatashiga Dowlada fedaraalka iyo dowladaha xumnaha ka ah oo ka qabsoomay ayaa faray in ay u diyaar garoobaan shirka Dhuusamareeb oo loo balansanyahay in ay marti galiso Galmudug.
Hogamiye ku xigeenka Galmudug ayaa hadalkaan ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday Magaaladda Dhuusamareeb caasimada Galmudug taas oo ay ka gayb galeen Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug labadiisa ku xigeen, Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Galmudug, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ujeedkeedu ahaa in loogu mahadceliyo laamaha amaanka iyo qaybaha kale duwan ee bulshada ka qayb qaadashada martigalinta shirkii wadatashiga DFS iyo DG ee ka dhacay Dhuusamareeb.